Archive du 20171107
Feno 59 taona ny filoham-pirenena Tsy hita popoka indray i Voahangy R
Feno 59 katroka omaly ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina, izay teraka tao Antsofinondry Sabotsy Namehana ny 6 novambra 1958.
Mpitondra HVM Efa tsy mifampatoky intsony
Hifarana afaka roa volana latsaka kely ny taona 2017. Nitovy ny tamin’ny herintaona sy ny roa taona lasa ihany izy raha momba ny fitantanana ny firenena satria tsy nisy firy ny zava-bita nisongadina.
Volavolan-dalàn’ny tetibolam-panjakana 2018 Efa eny Tsimbazaza, hoy i Jean Max Rakotomamonjy
Efa tonga ety Tsimbazaza ary efa samy eny am-pelatanan’ireo solombavambahoaka tsirairay avy ka hampidirinay ao anaty « ordre du jour »
Rivo Rakotovao Minia manadino ny tantara…
Nametraka adihevitra eo amin’ireo lalàna vitsivitsy misy fiantraikany amin’ny fifidianana ny filoham-pirenena. Voaresaka ny andalana faha-47, mamehy ny tetiandro ahahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena.
Ambasadaoron’i Torkia Handao tanteraka an’i Madagasikara
Handao tanteraka an’i Madagasikara rehefa nahavita iraka diplaomatika nandritra ny 3 taona teto amintsika ny Ambasadaoron’i Torkia nonina sy niasa teto amin’ny nosy,
Mbola tsy tara
Salama jean a ! fa inona hany ary ity resaka mampihomehy ity e, rahefa tsy may ry jean dia ajanony amin’izay fa tsy mamba be tahaka io a;Olon a efa hitanao ve fa tsy amhita izya atsimo sy avaratra amin’ny asa dia raisnina fotsiny satra hoe Havana ?
Andrianiko ny Tanindrazako “Tsy mendrika ny ho Malagasy intsony i D Lain”
Miteraka resabe ny mahakasika ilay mpanakanto Malagasy malaza D-Lain, izay nanambady lehilahy Frantsay mitovy taovam-pananahana aminy. Samy manana ny heviny ny fiarahamonina.
Lalatiana Ravololomanana Efa nametra-pialana raha manan-kambo…
Sesilany ny fanaratsian’i Lalatiana Ravololomanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Lalao Ravalomanana, Ben’ny tanànan’Antananarivo,
Vidim-bary eny an-tsena Hanasazy ireo mpanararaotra ny fanjakana
Mbola mampitaraina ny maro hatrany hatreto ny findangan’ny vidim-bary eny an-tsena, indrindra fa ny any amin’ny faritra ivelan’Antananarivo Renivohitra.
Omen-danja ny fiahiana ara-tsosialy Nofanin’ny CNaPS ny mpiasan’ny minisiteran’ny vola
Nomen’ny CNaPS fanamafisam-pahalalana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ireo mpiasa ECD (Emploi de Courte Durée) eo anivon’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola (MFB) sy ny tetibola ao amin’ny faritanin’i Toliara.
Kaominina Avaratsena Ambohidratrimo Tafidina 500 Ar ny iray kilao amin’ny tongolobe, mijaly ny tantsaha
Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ireo tantsaha mpamokatra any amin’ny kaominina ambanivohitra Avaratsena, distrikan’Ambohidratrimo ankehitriny.
Fanendahana sy halatra anaty fiara Mirongatra eny Isotry, olona roa nalefa eny am-ponja
Mirongatra ny asa fanendahana sy fangalaran-javatra anaty fiara eny Isotry sy 67 ha eny.
Trano ravan’ny rivodoza miisa 2 tao Moramanga Maherin’ny 95 tapitrisa ariary no nanarina azy
Natolotr’Ambatovy tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny alakamisy 3 novambra teo ireo trano vita fanarenana roa ho an’ny distrikan’i Moramanga.
Depiote Horace sy ny TIM Boriborintany faha-6 Manampy ny ben’ny tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana
Ho fanohanana ny Ben’ny tanànan’Antananarivo-Renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana amin’ny ady amin’ny pesta ary fanamafisana ny tanjona Fonenana Madio
Rugby Analamanga Amin’ny alahady 11 novambra izao no hitohy
Araka ny fanambarana nataon’ireo mpikarakara ny fifaninanana rugby eto Analamanga dia ny “Comité Technique Fédérale”
Tsy afa-miala amin’ny fitsiokan’ny rivotry ny fanatontoloana tokoa isika ary dia tsy maintsy manaiky an’io ny rehetra na dia miezaka manda aza.
Fiverenan’ny fampianarana Mailo hatrany ny LTC Ampefiloha
Niverina nianatra nanomboka omaly 06 novambra ny sekoly rehetra, izay voatery nahatsahatra ny fampianarana noho ny fisian’ny valan’aretina pesta.